ထိုင်းဓာတ်မြေဩဇာ|ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ဖြန့်ချိရေး
ထိုင်းနိုင်ငံ Perlite ဓာတ်မြေဩဇာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖော့စဖိတ်ကျောက် တွင်းထွက်သတ္တု ဓာတ်မြေဩဇာ
ထိုင်းနိုင်ငံ Dolomite ဓာတ်မြေဩဇာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဂျစ်ပဆမ် ဓာတ်မြေဩဇာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ကယ်လဆီယမ် ဓာတ်မြေဩဇာ
TKK.FERTILIZERZ THAILAND About Us Our Products No.1 fertilizer factory in Thailand Produce all forms of fertilizer With modern technology from America Thanks to over 80% of farmers who trust us Tkk Tkk.fertilizer Contact Us No.1 fertilizer in Thailand
ထိုင်းနိုင်ငံရှိနံပါတ်တစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ၊ Chitosan၊ Organic စိုက်ပျိုးရေး၊ Organic ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ဇီဝအရည်ဓာတ်မြေသြဇာ
ထိုင်းဓာတ်မြေဩဇာ ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ဖြန့်ချိရေး
TKK ဓာတ်မြေဩဇာ (ထိုင်း) ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဝဘ်ဆိုက်မှကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုင်း၏ရှေ့ဆောင် ဓာတ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖြန့်ချိသူများဖြစ်ပြီး ဓာတ်မြေဩဇာ အမျိုးအစားအကုန် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်မှ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများအသုံးပြုသည့်အတွက် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး ဓာတ်မြေဩဇာများ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
၈၀% ထက်ပိုတဲ့ လယ်သမားတွေက ကျွန်ုပ်တို့ကို ယုံကြည်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လယ်သမားများနှင့်စက်ရုံခွဲများအတွက် ထိုင်းရှိ သဘာ၀အရင်းအမြစ်များမှ ကုန်ကြမ်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထပ်မံ၍ တချို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအတွက်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်ရေး စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပမာဏ ဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ခရိုအာဟာရဓာတ်များ၊မြေဆီလွှာကောင်းအာင် ပြုလုပ်ပေးသော ပစ္စည်းများနှင့် အခြားဓာတ်မြေဩဇာ အမျိုးမျိုးတို့အပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တနေ့ကို တန် ၃၀၀၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို ဂရုစိုက်ရန်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၏စံများနှင့် ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ဓာတ်မြေဩဇာများ ထောက်ပံ့ပေးရန် ကောင်းမွန်သောအနေအထား ရှိကြောင်း စိတ်ချနိုင်သည့်အပြင် သင့်မျှော်မှန်းချက်ကိုပါ ကျော်လွန်စေပါလိမ့်မည်။
ပန်းပွင့်အရှိန်လျှော့ဓာတ်မြေသြဇာ Chitosan အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာဇီဝအရည်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများစပါးဓာတ်မြေသြဇာရောင်းချမြေသြဇာဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအရည်ဓာတ်မြေသြဇာရောင်းရွက်ဓာတ်မြေသြဇာရောင်းအား
နံပါတ် ၁ မြေသြဇာပေးသူသည်ထိုင်းနိုင်ငံ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုင်းအခြေစိုက်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံသည်အမြင်အာရုံရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဌာန၏အရည်အသွေးနှင့်ကုန်သွယ်မှုစံနှုန်းများကိုလိုက်နာသောအရည်အသွေးမြင့်အော်ဂဲနစ်၊ ဓာတုနှင့်မြေဆီလွှာကိုတိုးမြှင့်သည့်ဓာတ်မြေသြဇာများကိုဆက်လက်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရီမီယံအရည်အသွေး၊ မျှတသောစျေးနှုန်းများနှင့်လုံးဝအကောင်းဆုံးကျင့်ဝတ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်မှုနှင့်ထိုင်းလယ်သမားများထုတ်လုပ်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောထုတ်ကုန်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
သင့်နံပါတ်တစ် ပရီမီယံအရည်အသွေး ဓာတ်မြေဩဇာများ ထောက်ပံသူ
သင်သည် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဓာတ်မြေဩဇာများကို ရှာဖွေနေပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်လိုအပ်ချက်များနဲ့ ကွက်တိကျသော ဓာတ်မြေဩဇာကို ရှာတွေ့မည်မှာ သေချာပါသည်။
အချိန်အေးဆေးယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါ။ အကယ်၍ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ လိုအပ်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို ယနေ့ပဲ သင်အဆင်ပြေသောအချိန်မှာ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
My apartment looks just great! Thanks for the beautiful plants and flowers. I enjoy spending timethere and adore every single one of them!
Our holiday wouldn’t have been this awesome if it wasn’t for you guys. Your skills and profesional approach allow achieving the best results!
Thank you so much for the wonderful celebration and the nice flowers! Everything went as we had planned, and I appreciated it very much!
TEL. +66896-0696986 +66836-909969 , +66881-7823582. , +66880-2699970